Big City Small World (Series 1 Episode7- Cheer Up!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on June 26, 2012 at 10:47 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode7- Cheer up! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၇)။ ပျော်ပျော်နေပါ!)
Magda သည် သူမ၏ ဘွဲ့ကို မကြာခင်ရတော့မည်ဖြစ်ပြီး လန်ဒန်တွင် ဗိသုကာ ပညာရှင်အဖြစ် အလုပ်လုပ်လိုသည်။
Series 1 Episode7- Cheer Up! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ Olivia ရေ!
ငါလာတဲ့အချိန်တိုင်း နင်က ဒီမှာရှိနေတယ်လေ… မသိရင် နင်ကဒီမှာနေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ …
အင်း၊ ငါ့ဆိုင်က ဘေးမှာလေ၊ အဲ့တော့ ဒီကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိတဲ့အချိန်တိုင်း လာလို့လွယ်တာပေါ့...
ဟို သူခိုးလေး ဘယ်ရောက်နေလဲ ဒီနေ့?
ဘယ်သူလဲ? အို! နင်က ငါ့တူလေး Joe ကို ဆိုလိုတာလား…
အတိအကျပဲပေါ့... ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြဿနာကောင်လေး!
ဒီနေ့သူက သူ့အမေ၊ ငါ့အစ်မနဲ့လေ။ သိရတာ စိတ်သက်သာရာရသွားလိမ့်မယ်။
ဆိုင်ကိုလာသွားသေးတယ်။ ခဏနေမှ ကော်ဖီသောက်ဖို့ ဒီကိုလာမယ်ပြောတယ်။
သူငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ ငါထင်တယ်။ သူ့ကို ခဏတစ်ဖြုတ် ရှောင်နေရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဘာလို့သူက နင့်ကို စိတ်ဆိုးနေတာလဲ?
အို နင်သိပါတယ်။ ငါတို့ ပိုက်ဆံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားများထားတယ်လေ - သူကငါ့အတွက် အဲ့ဒီအလုပ် လုပ်ပေးတော့မှာ..
အို ဟုတ်သားပဲ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ငါကတော့ သူစိတ်မဆိုးဘူလို့ထင်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးခဲ့ရင်တောင်မှ မကြာခင်မေ့သွားမှာပါ။ သူက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ နင်သိသားနဲ့။
အင်း။ ထင်ရတာပဲ။ ငါမေ့ထားလိုက်မှနဲ့တူတယ်။
ပျော်ပျော်နေပါဟ။ နင်တို့နှစ်ယောက်က ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ?
Sarah တိုက်ခန်းရှာတာ ဘယ်အခြေအနေရှိပြီလဲ?
ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်သေးဘူး။ ငါ နေဖို့တစ်နေရာရာ တစ်ကယ်လိုအပ်နေတယ်။ ငါတော်တော် စိတ်ပျက်နေပြီ။ အခြေအနေ ကောင်းမလာဘူးဆိုရင် ငါ အိမ်ခြေမဲ့ဘ၀ ရောက်ပြီ။
အို လုပ်စမ်းပါ။ အဲ့လောက်မဆိုးသေးပါဘူး...
ဟင့်အင်း။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်.. နေရာတစ်နေရာရှာရတာ တော်တော်ခက်တယ်...
နင်ရောက်လာတာ ငါဝမ်းသာပါတယ် - ငါနင့်ကို အဲ့ဒီအကြောင်းပြောချင်လို့...
အင်း... နင်စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် ကိစ္စတစ်ခုကြားလာလို့…
ငါ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ အခန်းပိုတစ်ခန်းရှိတယ်။
နင့် အစ်ကို ၀မ်းကွဲ... နင့်မိသားစုထဲမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲ...?
ကြားရတာ ကောင်းလိုက်တာ... ငါ အဲ့ဒီအခန်းကို ကြည့်လို့ရမလား?
ဒီမှာ၊ ငါနေစရာတစ်နေရာ တစ်ကယ်လိုအပ်နေတယ်၊ အရေးတကြီးပဲ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒါ အဆင်ပြေမှာပါ၊ ငါသေချာပါတယ်...
Fadi ကိုတွေ့ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပဲနော်...
Fadi ပါလား။ ဖုန်းနဲ့ပဲ အမြဲကပ်နေတာပဲ။ အမြဲအလုပ်လုပ်နေတာပဲ… ဒါမှမဟုတ် ကောင်မလေးတွေများလား!
တစ်ကယ်တမ်းတော့ သူက Sarah အခန်းရဖို့ ကူညီပေးနေတာ။
အို၊ အိုကေ၊ ကောင်းပါတယ်။ ဟယ်လို! အခြေအနေဘယ်လိုလဲ? ဘာလို့အားလုံး စိတ်ပျက်တဲ့ပုံပေါက်နေတာလဲ?
ငါက အခန်းရဖို့ ကြိုးစားရှာနေတုန်းလေ…
ငါကတော့ မကြာခင်ဘွဲ့ရတော့မယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလုပ်တစ်ခု ရရင်ရ မရရင်တော့ ပိုလန်ကို ပြန်ရတော့မယ်။
အဲ့ဒီတော့ နင်က လန်ဒန်မှာ နေချင်တယ်ပေါ့?
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကရှာရတာ အရမ်းခက်တယ်။
အင်း၊ ဒါပေမယ့် ငါက ဘားဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ဈေးဆိုင်မှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးလေ...
Magda: Sorry! I know you work inashop, but...that’s different..it’s your own shop, and you sell such special things, those lovely handmade shoes! But usually, you know, shopwork isn’t great..
တောင်းပန်ပါတယ်! နင် ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်... မတူဘူးလေ။ အဲ့ဒါ နင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လေ ပြီးတော့ နင်က ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ လှပတဲ့ လက်လုပ် ဖိနပ်လေးတွေရောင်းတာလေ! ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ နင်သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ဆိုင်အလုပ်က သိပ်မကောင်းလှဘူးလေ…
ဒါပေမယ့် နင်က ဗိသုကာပညာရှင် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလား?
Magda: Yes, exactly...but it’s not easy to get work as an architect. There’salot of competition here in London.
ဟုတ်တယ် အတိအကျပဲ... ဒါပေမယ့် ဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ရတာ မလွယ်ဘူး။ လန်ဒန်မြို့ မှာက ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးပဲ။
နင် တရုတ်ပြည်ကို သွားသင့်တယ်.. အဲ့ဒီမှာ အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပဲ။ အဆောက်အဦးတွေအများကြီးနဲ့။
နားထောင် Sarah ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့စကားပြောပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ဒီနေ့လည်မှာ ငါတို့ သွားပြီး အဲ့ဒီအခန်းကို ကြည့်ချင်ရင် ကြည်လို့ရတယ်။
အင်းလေ ငါနင်နဲ့တူတူသွားမယ်။ ဘယ်မှာလဲဆိုတာ ပြဖို့အတွက်ပါ…
အင်... ကောင်းပြီလေ... ကျေးဇူးပါ!
အင်း…နင်တို့ပြဿနာတွေတော့ ပြေလည်သွားကြပြီ… ဒါပေမယ့် ငါကတော့ ဒီမှာ သိပ်ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူး!
Permalink Reply by ashinmandala(min+maha) on July 5, 2012 at 12:13
This post is satisfy for me.Thank so much for sending to me.Welcome anytime.I'm so glad now to see that.
Permalink Reply by Arkar Myo Oo on July 5, 2012 at 17:12
Thank so much for sending to me.Welcome anytime.
Permalink Reply by Gyit on July 7, 2012 at 7:36
ွှ့Thksalot ===>>> Mnet;
Permalink Reply by Tanmoekhaing on July 7, 2012 at 21:02
Permalink Reply by Myo Min Than on July 8, 2012 at 9:17
Tons of thanks! But can you help us be downloadable this translation asapdf file?
Permalink Reply by Zaw Win on July 8, 2012 at 15:30
Permalink Reply by ayeayethat on July 10, 2012 at 13:05
Thank you very much for this episode - 7.
Permalink Reply by TINT TINT KHAING on July 11, 2012 at 23:04
Thank you so much for your Episode. I shared with my friend.
Permalink Reply by Zinmar Myint on July 12, 2012 at 12:15
Thanks for your posting! Conversation Text and MP3 are very useful for me. I'm waiting this posts.
Permalink Reply by khin myo swe on July 13, 2012 at 13:34
Thank you very much. i like that.
Permalink Reply by Aung Thet Paing on August 8, 2012 at 12:35
Permalink Reply by thant zin tun on October 7, 2012 at 5:38